ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ BEST Inc. သည် နယူးယောက် စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်း စံချိန်စံညွှန်း များနှင့် ပြန်လည် ကိုက်ညီ သည် – Pandaily
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ BEST Inc. သည် နယူးယောက် စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်း စံချိန်စံညွှန်း များနှင့် ပြန်လည် ကိုက်ညီ သည်
Jun 10, 2022, 11:44မနက် 2022/06/10 14:19:03 Pandaily
Best, တရုတ် အသိဉာဏ် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် ဖြေရှင်းချက် နှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ပေး သူကြာသပတေး နေ့က နယူးယောက် စတော့အိတ်ချိန်း မှ ကုမ္ပဏီသည် စံချိန်စံညွှန်း များနှင့်ကိုက်ညီ မှု ရှိကြောင်း အသိပေး ချက် ရရှိ ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် နယူးယောက် စတော့အိတ် ချိ န်းက ကုမ္ပဏီ အား ဆက်လက် စာရင်း ပြု ရန် စံနှုန်း များ နှင့်မကိုက်ညီ ကြောင်း ကုမ္ပဏီ အား အကြောင်းကြား ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်အထိ ကုမ္ပဏီ၏ အမေရိကန် အပ်ငွေ ရှယ်ယာ များ၏ပျမ်းမျှ ပိတ် ဈေးသည် ရက်ပေါင်း ၃၀ ဆက်တိုက် ကုန်သွယ်ရေး ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာ အောက်သာရှိသည်။ မေလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အသစ်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ADS ၏ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀. ၀၁ တန်ဖိုး ရှိသည့် Class A ဘုံ ရှယ်ယာ ၅ ခုနှင့် အချိုးအစား ဖြစ်သည်။
Best Corporation ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နယူးယောက် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် တရားဝင် စာရင်းဝင် ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည် ကြာမြင့်စွာ ကတည်းက ဆုံးရှုံး မှုများကို မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ လက ပြည်တွင်း အမြန် ပို့ဆောင် ခြင်း လုပ်ငန်းကို J & T Express သို့လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဆုံးရှုံး မှုများကို အမြတ်အစွန်း အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ အသား တင္ အျမတ္ ေငြ ယြမ္ ၂ ၆၁ ဒသမ ၉ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉ သန္း) ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကထက္ ၁၁၂ ဒသမ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာ ခဲ့ကာ ဒါဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ တစ္ ႏွစ္လံုး အျမတ္ အစြန္း လည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။
သို့သော် ယခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် Best Company သည်စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ ယွမ် ၁. ၈ ၀၃ ဘီလီယံ၊ တစ်နှစ် တစ်နှစ် ၃၅. ၂% ကျဆင်း မှုနှင့် အသားတင် လည်ပတ်မှု အရှုံး ယွမ်သန်း ၃၈၀ နှင့် ယမန်နှစ် အလားတူ ကာလက ယွမ် ၁ ၉၁. ၂ သန်း ရှိခဲ့သည်။
BEST Inc. ၏ ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် လုပ်ငန်းမှ ၀ င်ငွေ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ပထမ သုံးလပတ်တွင် ကုန် တင်ကုန် ချ လုပ်ငန်း သည်ယွမ် ၁. ၀ ၉၃ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် တစ်နှစ် ၄၆. ၅% ကျဆင်းခဲ့သည်။ အချို့သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရေယာဉ် များ၊ အချက်အချာ နေရာ များနှင့် အမျိုးအစား ခွဲ ခြင်း စင်တာ များမှ ကန့်သတ် ထားသည့် ကုန်တင် ပမာဏသည် ယူနစ် ၁. ၆ ၈၃ သန်း ပြီးစီး ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၃. ၅% ကျဆင်းခဲ့သည်။ ပထမ သုံးလပတ်တွင် ကုမ္ပဏီ သည်စုစုပေါင်း ရောင်းအား ၏ ၂၂. ၂% ရှိသည့် e-commerce နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိုအာရုံစိုက် နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို ကာလအတွင်း ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် စီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ ၀ င်ငွေသည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၈. ၆% ကျဆင်းခဲ့ပြီး ယွမ် ၄ ၀၉ သန်း သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။
BEST Inc ၏ တည္ေထာင္သူ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Johnny Chou က “ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္း လာ တာနဲ႔ အမွ် တ႐ုတ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသရွိ ေထာက္ပံ့ ေရး ကြင္းဆက္ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္ စြာ ျပန္လည္ လည္ပတ္ လာ မယ္လို႔ ယံုၾကည္ ပါတယ္။ နည်းပညာ, ပြည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ အဆုံး မှ အဆုံး ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် နှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး စွမ်းရည် အတွက် BEST ၏အားသာ ချက်များ, တရုတ် အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျယ်ပြန့် ဖောက်သည် အခြေစိုက်စခန်း, ခိုင်မာတဲ့ ငွေသား သိုက် နှင့်အတူ ကျွန်တော်တို့ကို တိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်း ကို အမိအရ ယူ နှင့် အမြတ်အစွန်း လမ်းကြောင်း ပေါ် စတင် ရန် ခွင့်ပြု ပါလိမ့်မယ်။ “
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ BEST Inc. တိုက်ရိုက် စီမံခန့်ခွဲမှု SaaS tool ကိုစတင် ခဲ့သည်
Best ဘဏ္ Financial ာရေး အရာရှိ ချုပ် Gloria Fan က “ ပထမ သုံးလပတ် ရဲ့ အဆုံး မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ကျန်ငွေ နဲ့ ငွေသား နဲ့ ညီမျှ တဲ့၊ ကန့်သတ် ထားတဲ့ ငွေသား နဲ့ ရေတို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လက်ကျန် ဟာ ယွမ် ၅. ၃ ဘီလီယံ ရှိတယ်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲ တဲ့ တိုးတက် မှုနဲ့ အမြတ်အစွန်း ရရှိဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာ အာရုံစိုက် မှု ကိုဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် သွား မှာပါ” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။